काभ्रेमा एकै दिन १ सय ५ जना कोरोनाबाट निको भए
स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा. नरेन्द्रकुमार झाका अनुसार हालसम्म काभ्रेपलाञ्चोकमा कोरोना स‌ंक्रमितको संख्या १५ सय ३३ जना पुगेको छ । बुधबार एकै दिन १ सय ५ जना कोरोनाबाट निको भएका छन् । हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या १ हजार ७८ जना रहेको छ । कोरोना संक्रमणकै कारण २८ (१८ पुरुष र १० महिला )जनाको मृत्यु भइसकेको छ । मृत्यु हुनेमा काभ्रे जिल्लाभन्दा बाहिरका ११ (८ पुरुष र ३ महिला) जना रहेका छन् । यो हिसाबले हालसम्म काभ्रे जिल्लामा १० पुरुष र ७ महिलाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको हो । हेर्नुस स्वास्थ्य कार्यालयले १२ कात्तिकमा जारी गरेको विवरणः
काभ्रेपलाञ्चाेकमा काेराेना स‌ंक्रमित १५ सय नाघ्याे
स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा. नरेन्द्रकुमार झाका अनुसार हालसम्म काभ्रेपलाञ्चाेकमा काेराेना स‌ंक्रमित १५ सय ३२ जना पुगेकाे छ । हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या ९७१ जना रहेकाे छ । काेराेना संक्रमणकै कारण २६ जनाकाे मृत्यु भइसकेकाे छ । हेर्नुस स्वास्थ्य कार्यालयले ११ कात्तिकमा जारी गरेकाे विवरणः
एकताकाका ‘मोटे’ मानसरोबर, अहिले बन्नुभाे ‘योगगुरू’
स्थानीय बनेपा रोशी जीवनशैली
लगातार ४ वर्षसम्म आफुमात्रै योगाभ्यास गरिरहनु भएका मनसरोबर यतिखेर भने मङ्गलटारका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई योगाभ्यासका लागि आह्वान गर्न थाल्नु भएको छ । हरेक विहान मङ्गलटारको पुरानो बजारस्थित चौतारोमा उहाँले स्थानीयहरूलाई आफूले सिकेको सीप नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै व्यस्त हुनुहुन्छ ।
काभ्रेमा एकै दिन ११० जनामा काेराेना स‌ंक्रमण
स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका स्वास्थ्य प्रशासक डा. नरेन्द्रकुमार झाका अनुसार शुक्रबार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ११० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
काभ्रेमा कोरोना संक्रमित ३१ थपिँदा ६२ जना डिस्चार्ज, सक्रिय संक्रमित ५ सय भन्दा तल
स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका स्वास्थ्य प्रशासक डा. नरेन्द्रकुमार झाका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा कोरोना संक्रमणलाई जितेर घर फर्कनेहरुको ८ सय ३५ जना पुगेको छ । बुधबार ६२ जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् । अघिल्लो दिन ७१ जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका थिए ।
नमोबुद्धका सय बढी विपन्नलाई दशैंलक्षित राहत प्रदान
नमोबुद्ध नगरपालिकाका सय भन्दा बढी विपन्न परिवारलाई दशैंलक्षित राहत वितरण गरिएको छ । नेपाल जेसुइस सामाजिक संस्थाको सहयोगमा नमोबुद्ध नगरपालिकाले नगरभित्रका ११ वटै वडाका १ सय १२ परिवारलाई राहत वितरण गरेको हो । आज नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमल्सिनाले राहत वितरण गर्नुभएको छ । राहत प्याकेजमा प्रतिपरिवार १ बोरा चामल, १ किलो नुन, १ किलो चना, १ लिटर तेल, १ केजी सोयाविन तथा २ किलो दाल रहेको छ । नगरपालिकाका सबै वडाका अति विपन्न, अशक्त, अपांग तथा एकल महिलालाई राहत दिइएको नगर प्रमुख तिमल्सिनाले बताउनुभयो । नमोबुद्ध नगरपालिकाले कोभिड १९ महामारी सुरु भएयता वितरण गरेको यो चौंथोपटकक...
गुरुकुल सञ्चालनमा प्राडा भोला थापाको आर्थिक सहयोग
बनेपा–६ स्थित गोसाइस्थान नैमिषारण्य क्षेत्र बिकास समितिअन्तर्गत नैमिषारण्य संस्कृत गुरुकुल सञ्चालनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) का पूर्व रजिष्ट्रार प्राडा. भोला थापाले मंगलबार एक लाख ११ हजार एक सय ११ रुपैंया प्रदान गर्नु भएको छ । प्राडा थापाले सो रकम पूजनीय माता अन्जु थापा र स्वर्गीय पिता बद्रीबहादुर थापाको सम्झनामा प्रदान गर्नु भएको हो । नैमिषारण्य संस्कृत गुरुकुलले प्राप्त रकमबाट पूर्वीय दर्शन ,विज्ञान प्रविधि तथा कला र धर्म-संस्कृतिको संरक्षण र अध्ययन अध्यापनका लागि उपयोग गरिने जनाएको छ । रकम हस्तान्तरण पछि प्राडा थापाले लेख्नु भएको छ, 'गुरूकुल मार्फत संस्कृत शिक्षा-धर्म र बिज्ञान...
एकै दिनमा हालसम्मकै धेरै जना ‘डिस्चार्ज’
स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका स्वास्थ्य प्रशासक डा. नरेन्द्रकुमार झाका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा कोरोना संक्रमणलाई जितेर घर फर्कनेहरुको ७ सय ७३ जना पुगेको छ । मङ्गलबारमात्रै ७१ जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् । यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो ।